Guddoomiyaha Midowga Afrika oo Saddex hoggaamiye hore u magacaabay xal u helida dagaalka Itoobiya - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Guddoomiyaha Midowga Afrika oo Saddex hoggaamiye hore u magacaabay xal u helida dagaalka Itoobiya
ADDIS ABABA (HALBEEG)- Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, sidoo kalena ah Guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa dagaalka ka socda Itoobiya ee u dhaxeeya Dowladda iyo Maamulka TPLF u magacaabay inay xal u raadiyaan sadex Madaxweyne oo hore.
Saddexda Madaxweyne ee hore ee loo xil saaray xal u raadinta dagaalka ayaa kala ah, Joaquim Chissano, Madaxweynihii hore Mozambique, Ellen Johnson-Sirleaf, Madaxweynihii hore Liberia iyo Kgalema Motlanthe, Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Koonfur Afrika.
“Shaqadooda ayaa ah dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya Itoobiya” ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha Midowga Afrika.
Ergada la magacaabay ayaa u safri doona dalka Itoobiya iyaga oo uu hadafkoodu yahay dhexdhexaadinta dowladda iyo jabhadda TPLF si loo joojiyo dagaalka khilaafaadka jiran lagu dul xalliyo miiska wadahadalka.
Madaxweyne Ramaphosa ayaa u mahad celiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Itoobiya Abiy Ahmed oo aqbalay qorshahan lagu dhexdhexaadinayo dowladda federaalka iyo Jabhadda TPLF, isaga oo caddeeyay inuu la shaqeyn doono ergada la magacaabay.